एशले बार्न्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम
आफ्नो पासवर्ड पुन: प्राप्त
किन बचपनका कथाहरू
किन अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
स्वागत छ! आफ्नो खातामा लग
आफ्नो पासवर्ड बिर्सिनुभयो? मद्दत प्राप्त
घर युरोपियन स्टार एशले बार्न्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
एलबीले पूर्ण स्टोरीको एक फुटबल प्रतिभाशाली नाम प्रस्तुत गर्दछ "बर्नी“। हाम्रो एशले बार्नेस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
एशले बार्नेस बाल्यकाल कहानी - मिति विश्लेषण। लाई क्रेडिट बीबीसी र दैनिकमेल
विश्लेषणमा उसको सुरुको जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रारम्भिक क्यारियर जीवन, प्रख्यात कथाको मार्ग, प्रख्यात कथामा वृद्धि, सम्बन्ध, व्यक्तिगत जीवन, जीवनशैली, पारिवारिक जीवन र अनकही तथ्यहरू समावेश छन्।
हो, सबैले बार्न्सलाई त्यो स्ट्राइकरको रूपमा देख्दछ जसले प्रतिद्वन्द्वीलाई घुमाउन र ठूलो गोलहरू बनाउनका लागि बढ्दो प्रतिष्ठा सिर्जना गरेको छ। यद्यपि केवल थोरैले एशले बार्नेसको जीवनीलाई ध्यान दिन्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
एशले बार्न्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सबैले उसलाई एश्ले बार्नेसको रूपमा चिन्छन् तर उनका पूरा नामहरू एशले लूका बार्न्स हुन्। बार्नेसको जन्म अक्टूबर 30 को 1989th दिनमा युनाइटेड किंगडमको बाथ शहरमा भएको थियो। उहाँ गैर ब्रिटिश पारिवारिक जरा संग अंग्रेजी आमा बुबा को लागी जन्म भएको थियो। बार्न्सको पारिवारिक उत्पत्ति अष्ट्रियाबाट आएको हो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनको बुवा हजुरआमा दक्षिणी अस्ट्रियाको शहर क्लेजेनफर्टका हुन्।
एश्ले बार्नेस इ England्ल्यान्डको बाथमा हुर्केका थिए, जुन रोमनले निर्मित बाथहरू र रोमन पुरातात्विक साइटहरूका लागि परिचित थियो। यसले सम्भवतः यो कारण वर्णन गर्न सक्छ किन एशले बार्न्सका बुहारी हजुरआमाले अष्ट्रियाको अ the्ग्रेजी शहरमा बसाई छोडे।
एशले बार्न्स इ्ल्यान्डको बाथ- ए शहरकी हुन्। लक्जरीट्राभालाभाइजर र वर्डआटलासलाई क्रेडिट
एशले बार्न्सको प्रारम्भिक जीवनका रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि ऊ एक मध्यम-वर्ग परिवार पृष्ठभूमि मा हुर्काएको थिएन। उनी पुरातात्विक दर्शनीय स्थलमा मात्र चासो राख्दैनथे, केवल फुटबल। एशले बार्नेसका अभिभावकहरू बाथमा प्रायः परिवारहरू जस्तै थिए जो सक्षम थिए एक फुटबल सहित आफ्नो छोराको लागि खेलौना को नयाँ संग्रह, किन्न।
एशले बार्न्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
फुटबल प्रेम गर्ने अभिभावक भएको, बार्निसको सुन्दर खेलको प्रेममा पर्नु स्वाभाविक हो। यसमा पनि उनी एक पेशेवर फुटबलर बन्ने सपना देख्छन्।
एशले बार्न्स फुटबलमा पहिलो सहभागिता उनको प्राथमिक शिक्षाको दौरान आयो। त्यतिखेर उनका बाबुआमाले उनलाई भर्थल्टन स्कूलमा भर्ना गरे जुन इ Bath्गल्याण्डको बाथ नजिकको डुन्कर्टन भन्ने गाउँमा अवस्थित छ। स्कूलमा, एशले प्रतिस्पर्धी फुटबल खेल्नमा रुचि लिए।
एशले बार्न्स शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप। GoogleMaps मा क्रेडिट
स्कूलबाट टाढा, बार्नेसले आत्मविश्वासका साथ फुटबल खेल्ने क्रम जारी राख्यो र आफ्नो निशानालाई हटाउने र फुटबल बलको साथ निलो बाहिर काम गर्ने बानी बसाल्यो। यो उनले गरे उनका साथीहरू र परिवारका सदस्यहरूको छक्क पर्न।
एशले बार्न्स एक बच्चाको रूपमा उच्च लक्ष्य र एक पेशेवर फुटबलर बन्ने उनको दृढ संकल्प को लागी कल्पना थियो। आफूलाई काममा राखेर उसले बाथ आर्सेनल जूनियरसँग फुटबल परीक्षणहरूमा भाग लिन सोमरसेट काउन्टीमा रहेको चिलवुड ड्राइभमा यात्रा गर्ने निर्णय गरे।
एशले बार्न्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
सानो छँदा बार्नेसले आफूलाई बित्दै गरेको देखे स्नान आर्सेनल जुनियर्स एकेडेमी परीक्षणहरू र सफलतापूर्वक क्लबमा नामांकन। बाथ आर्सेनल जूनियर फुटबल, यद्यपि गनर्ससँग सम्बद्ध छैन फुटबल क्लब हो जुनसँग सबै युवा उमेरका बच्चाहरूको लागि टोलीहरू हुन्छन्।
क्लब बाथ आर्सेनलमा हुँदा, एश्ले बार्न्सले आफ्ना साथी साथी स्कट सिन्क्लेयरलाई भेटे जो पेशेवर बने। सिन्क्लेयर नौ वर्षको उमेरमा ब्रिस्टल रोभरमा सामेल हुन जानु अघि दुबै केटा सँगै उनीहरूको सकारात्मक समय थियो।
एथली बार्न्स अर्ली लाइफ बाथ आर्सेनलको साथ। आईजी लाई क्रेडिट
चाँडै, सबै एशले चाहेका थिए कि अंग्रेजी फुटबलको शीर्षमा पुग्ने। उसको शब्दहरुमा:
“हरेक दिन म ब्यूँझन्छु, मैले आफैलाई चुम्नु पर्छ। समर्थक बन्ने सपना अचम्मको थियो र यो म दिन कलिलो छ जब प्रत्येक दिन सपना थियो। "
एशले बार्न्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
एशले बार्नेसले आफ्नो वरिष्ठ क्यारियर सुरुआत इंग्लिश दक्षिणी लिगमा अवस्थित स्थानीय क्लब, पाल्टन रोभर्ससँग गरेका थिए। तल चित्रित युवा बार्नेस अंग्रेजी फुटबल लीग प्रणालीको सब भन्दा कम लिगमा एक थियो।
वरिष्ठ फुटबलको साथ एशले बार्न्स अर्ली लाइफ। बीबीसी र डेभ राउन्ट्रीमा क्रेडिट
एशले बार्न्सलाई आफ्नो सुरुको क्यारियर बर्षको अवधिमा उच्च मूल्या -्कन गरिएको थियो। उनले इ the्ल्यान्ड सीनियर लिगमा ठूला क्लबहरूबाट धेरै राम्रो प्रस्तावहरू प्राप्त गर्न शुरू गरे। यो उपलब्धि उनको दक्षिणी लिग देखि अंग्रेजी लिग प्रणाली को सबैभन्दा शीर्ष को प्रस्थान - प्रिमियर लिग।
एशले बार्न्स गाह्रो तरीका सिक्यो अक्सफोर्ड युनाइटेड, सलिसबरी सिटी, ईस्टबोर्न बरो, टोरक्वे युनाइटेड र ब्राइटन होभ अल्बियनमा loanणको मन्त्रको साथ। प्रत्येक loanण जादूको आफ्नो व्यवस्थापकहरूलाई प्रभावित गर्न सीमित समय भएको मार्क गरियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे र अंग्रेजी लीग प्रणालीको तल्लो अंश तोडेर लोनको माध्यमबाट पहिलो छनोट स्ट्राइकर हुने नाममा धेरै शीर्षमा पुर्‍याए।
एशले बार्न्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
एशले बार्न्सले आफूले चाहेको कुरा पाएनन्, जुन क्लबले स्थायी सम्झौताको प्रस्ताव राख्ने क्लबको लागि पहिलो छनोट स्ट्राइकर बन्ने सपना थियो। सबै कुरा वास्तवमा 2011 – 12 seasonतुमा भयो जब उनले ब्राइटनलाई सबै प्रतियोगितामा 14 गोलका साथ अग्रणी गोल स्कोररको रूपमा अग्रणी गोल च्याम्पियनशिप फिर्सन गर्न मद्दत गरे।
10 जनवरी 2014 मा, बार्न्सको प्रदर्शनले उनलाई बर्नीले अज्ञात शुल्कको लागि अपहरण गरेको देख्यो। केवल चार बर्षमा, मार्च3को ठीक 2018rd मा, उनले आफूलाई क्लबको ईतिहासका पुस्तकहरूमा लेखे जब उनी EPL मा क्लबको अग्रणी स्कोरर बने जब यो 1992 मा गठन भएको थियो। लेख्ने समयमा पनि बार्नेसले आफ्ना लक्ष्यहरूमा ठूला वा साना दुबै विपक्षीलाई समाहित गर्नका लागि बढ्दो प्रतिष्ठा कमाएको छ।
एशले बार्नेस आफ्नो एक गोल मनाउँदै प्रिमियरलिग
यद्यपि उहाँ स्तरमा नहुन सक्नुहुन्छ सर्जियो अगुरो, तर बर्न्ने फ्यानहरूको लागि, tउसले बहुमूल्य नम्बर 10 को सम्झना सँधै याद राख्दछ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
एशले बार्न्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
सफल अ English्ग्रेजी फुटबलर पछाडि, त्यहाँ Zan बार्नेस नाम गरेको एक ग्लैमरस प्रेमिका को बारे मा कम जानकारी छ। बार्न्स र झा दुबै विवाहित छन् र लामो समय को लागी सँगै थिए। सँगै, तिनीहरूको एक फ्लिन नामको छोरो छ जो 2011 मा जन्मेका थिए।
एशले बार्नेस चाइल्ड- फ्लान बार्नेसलाई भेट्नुहोस्
फ्लान2बर्षको वरिपरि हुन सक्छ जब उनले यो ब्राइटन जर्सी र 8 वर्ष लगाए जुन यो लेख लेख्ने समयमा थियो।
एशले बार्न्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
एशले बार्न्सको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले तपाईंलाई उसको पूरा तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। समय हामीलाई यो बुझ्न लगाउन कि बार्नेस एक डाउन टू धरती फिगर हो जो आफ्नो टीमका साथीहरूलाई अत्यन्त दयालु हुन्छ। ऐश-क्याब्स, जसलाई उसको उपनाम दिइएको छ एक व्यक्तिको वाहक र नेता हो जसले आफ्ना साथीहरूलाई यातायातका लागि मद्दत गर्न खुशी हुन्छ।
बार्नेसले क्याब ड्युटी गर्दै गरेको शीर्ष फुटबलर देख्न यो विशिष्ट प्रिमियर लिग दृश्य होईन। बार्नेस भने प्राय: क्लबको प्रशिक्षण मैदानमा बर्लेको कार पार्कमा घुम्दछन् र उनीसँगै बसमा रहेका उनका क्लबका केही साथीहरू। यहाँ एक प्रशंसक द्वारा कहानी को एक खाता छ;
जब यात्री ढोका तर्फ स्लाइड भयो, मैले एक एक गरी सात फुटबलरहरू देखा प .्यो। त्यसोभए ड्राइभरको ढोका खुल्छ र बाहिर जान्छ, तिनीहरूको अग्रणी गोल स्कोरर र नियुक्त ड्राइभर एशले बार्न्स।
सुरुमा, बार्नेसले स्मार्ट कार ड्राइभ गर्‍यो, तर पछि उनले मिनी बसमा अपग्रेड गरे जुन तल अवलोकन गरिएको छ। उनले त्यो आफ्नो टीमका साथीहरूको कारणले गरे।
एशले बार्न्स लाईफ स्टाइल तथ्यहरू। AutoEvolve मा क्रेडिट
यही कारण हो कि बर्नले एफसीको आध्यात्मिक नेतालाई उपनाम पनि दिइएको छ "ऐश-क्याब्स"। बर्नले फुटबलरहरू कप्तान र No10 उनीहरू लिन आउनु भन्दा पहिले चिसाइरमा बिहान सबेरै उठेको पिकअप पोइन्टमा भेला हुन्छन्।
एशले बार्न्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
बारन्सका परिवारका सदस्यहरू अधिकांशतः बेलायत र अष्ट्रियामा बस्छन्। जबकि सबैले आशा गर्छन् कि उनको नजिकको परिवार सबै बर्ले प्रशंसकहरू हुनेछन्, विपरित केस हो। एशले बार्न्सका छोरा फ्लान विशाल शहरका फ्यान हुन्।
बर्नलेका स्ट्राइकर एशले बार्न्सले एकपटक दावी गरे कि उनलाई थप प्रोत्साहन दिने प्रतिज्ञा गरिएको थियो जर्गन क्लप्प एसएमएस मार्फत उनले म्यानचेस्टर सिटी विरुद्ध स्कोर गरेका छन् जसले गर्दा तिनीहरूको शीर्षक आशा बिगार्दछ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… फ्लान यो सुनेर खुसी भएन। "उसले मलाई भन्यो, 'बुबा आउनु होस्, गम्भीर नहुनुहोस् !!' मैले उसलाई भनें ... 'माफ गर्नुहोस् छोरा, मैले आफ्नो काम गरें।'
धन्यबाद, बार्नेसले केहि गरेनन् जुन लिभरपूलको निर्देशनमा प्रीमियर लीग शीर्षक झुकाव थियो। यदि उसले त्यसो गर्यो भने ऊ एक अत्यन्तै दुखी बालक भएको थियो र उसले हिर्काउन घर फर्किनु पर्नेछ।
एशले बार्न्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - LifeStyle
कसैको लागि जसले एक पटक एक स्मार्ट कार हरेक दिन प्रशिक्षणको लागि चलाउँदछ, तर यसलाई एक मिनी बसमा अपग्रेड गर्दछ, यो अनुमान गर्न सजिलो छ कि बार्नेस साधारण जीवन बिताउँछन्। In विदेशी कार र सामाजिक मिडिया समावेशको फुटबलको दुनिया, बार्नेस मनपर्दछ Ngolo Kante स्फूर्तिदायी औषधी हो।
एशले बार्न्स लाईफ स्टाइल तथ्यहरू। AutoEvolve मा क्रेडिट। स्वतः विकासको लागि क्रेडिट र समय
मार्च 2018 मा, हड्तालले प्रति वर्ष 2.4 मिलियन यूरो (2.0 मिलियन पाउन्ड) को एक ठूलो तलब कमायो। क्रन्चिंग जुन प्रति समय आयमा, यसको मतलब एशले बार्न्सले प्रति दिन N 5,632 र प्रति घण्टा 235, minute 3.91 प्रति मिनेट र £ 0.07 प्रति सेकेन्ड कमाउँछ। यति धेरै आर्जन गरे पनि बार्नेस आफ्नो पैसाको प्रबन्ध गर्ने बारेमा धार्मिक छ।
एशले बार्न्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
पिचमा चुम्बन गर्नका लागि बुक गर्नुहोस्: यो घटना अप्रिलको 13th, 2019 मा भयो। यो दिन एशले बार्न्स फुटबल प्रशंसकहरु को रूप मा उल्लेख मा बुक गरीएको थियो "सबै भन्दा कडा परिस्थितिहरु“। उनले तल के गरे हेर्नुहोस्।
एशले बार्न्स अनटोल्ड तथ्यहरू - अनर्थोडक्स बुकिंग। खेलकुदलाई क्रेडिट। क्रेडिट खेलबिच
तपाईंलाई थाँहा थियो?… He कार्डिफ शहर बिरूद्ध एक खेलको क्रममा जो बेनेट नामक डिफेन्डरलाई चुम्बन गर्न रेफरीले बुक गरेको थियो। दुबै खेलाडीहरू पहिलो-आधा स्टपपेज समयमा झगडा भयो जसको कारण झगडा भयो। बेनेटतिर आफ्नो टाउको उठाउनुको सट्टा बार्नेसले उसलाई चुम्बन दिएर स्नेह देखाउने निर्णय गरे।
एक सन्दर्भ TIPPING:9मार्च 2013 मा, बार्न्सले बोल्टनको बिरूद्ध रोकिने समयमा रेड कार्ड प्राप्त गर्‍यो जुन पनि एक अत्यन्त अनौठो सामानको रूपमा मानिन्थ्यो। उनले खेल रेफ्री ट्रिप अप मा एक सफल प्रयास थियो।
एशले बार्न्सले एक रेफ्री ट्रिपिंगको लागि बुक गरे। डेलीमेलमा क्रेडिट
यो अंग्रेजी एफए द्वारा एक गम्भीर अपराधी मानिएको थियो जसले उसलाई सात खेलको प्रतिबन्ध हस्तान्तरण गर्‍यो। उनका प्रशंसकहरूलाई उत्साहित गर्न, बार्न्स 20 अप्रिलमा प्रतिबन्धबाट फर्के जसले6– 1 ब्ल्याकपूलमा दुई गोल गरे। उनलाई म्यान अफ द म्याच घोषित गरियो।
सबैभन्दा महान्‌ डिफेंडर उहाँ सधैंभरि आउनुभयो: यो बाहेक अरु कुनै व्यक्ति छैन Virgil van Dijk, मात्र एक दावीकर्ताले उसले दावी गरेको छ कि उसले आफ्नो सबै चालहरूमा बेवास्ता गरेको छ।
एशले बार्न्सले भर्जिल भ्यान डिजकलाई सबैभन्दा कठिन डिफेन्डरको रूपमा देख्दछ जुन उनले अहिलेसम्म सामना गरेका छन। BurnleyExpress लाई क्रेडिट
उनका शब्दहरूमा:भर्जिल भ्यान डिज্ক मेरो क्यारियरमा सबैभन्दा कठिन सबैभन्दा कठिन व्यक्ति हो। उहाँ एक्लो हुनुहुन्छ, मैले किनार पाएको छैन। उहाँ बलियो र शक्तिशाली मार्ग हो। भर्जिल एक मेसिन हो, ”बार्नेसले भने।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो एशले बार्न्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
अस्ट्रियाली फुटबल डायरी
बर्नले फुटबल डायरी
अंग्रेजी फुटबल डायरी
सम्बन्धित लेखहरूलेखकबाट थप
एडी Nketiah बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
टम डेभिस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
मेसन होलगेट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Japhet Tanganga बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
तारिक लैम्प्ते बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
क्रिस वाइल्डर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
ब्रान्डन विलियम्स चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
जोन लुन्डस्ट्रम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
टायरोन मिन्स चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
क्रिस वुड बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
तपाईले गलत इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुभएको छ!
मेरो नाम, ईमेल, र वेबसाइट यस ब्राउजरमा बचत गर्नुहोस् अर्को पटक मैले टिप्पणी गरेको लागि।
अच्राफ हाकिमी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
vannyhenrico - फेब्रुअरी 27, 2020
अल्फोन्सो डेभिस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
फेब्रुअरी 23, 2020
सत्य अनटोल्ड स्टोरीहरू
vannyhenrico - फेब्रुअरी 27, 2020 0
vannyhenrico - फेब्रुअरी 23, 2020 1
फेब्रुअरी 27, 2020
केएलियन एमपीपी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
20 सक्छ, 2017
पल Pogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जुन 21, 2016
रोनाल्डो लुइस नाजारी डे लीमा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
13 सक्छ, 2017
हरेक फुटबलको बचपनको कथा छ। लाइफबगरले फुटबल स्टारको बारेमा उनीहरूको बचपनको समयबाट सबै भन्दा अधिक मनोरञ्जन, आश्चर्यचकित र आकर्षक कथाहरू कैद गर्दछ। हामी विश्वको सबैभन्दा राम्रो डिजिटल स्रोत बालबालिकाको कथा प्लस अनबल्ड जीवनीका तथ्यहरुका लागि फुटबलका संसारका वरिपरि।
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस: lifebogger@gmail.com
© प्रतिलिपि अधिकार 2016 - हेजपेक्स टेक्नोलोजीहरू द्वारा डिजाइन गरिएको विषयवस्तु
फ्रैंक लम्पर्ड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अगस्ट 11, 2017
डैनी वेल्डबेक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
फेब्रुअरी 2, 2018
बेन Chilwell बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अक्टोबर 22, 2018
जन टेर्री बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
कोरिण ट्रिपियर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जुन 20, 2018